လင်းကိုကို၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Started this discussion. Last reply by ကိုကို Aug 19, 2013.4Replies0Likes
အထူး အထူး ဆိုပြီး စကားလုံးကို နေရာတိုင်းလိုလိုပင် တွေ့နေရပါသည်။ အထူးအစီအစဉ် အထူးဟောပြောပွဲ အထူးထုတ် အထူးကား အထူး............ စသည်ဖြင့် နေ့စဉ်လိုလိုပင် တွေ့မြင်နေကြရပါသည်။ ယခု အထူးတရားပွဲဆိုပြီး…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ဓမ္မနှင့် အဓမ္မ မည်သို့ ခွဲခြားပါသနည်း..
Started this discussion. Last reply by လင်းကိုကို မေ 2, 2013.2Replies0Likes
ကျေးဇူးပြုပြီး ဆွေးနွေးကြပါ ခင်ဗျာ.ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
သမထ ဘာဝနာနဲ့ ၀ိပသနာ ဘာဝနာ
Started this discussion. Last reply by လင်းကိုကို Mar 12, 2013.4Replies 1 Like
သမထ ဘာဝနာနဲ့ ၀ိပသနာ ဘာဝနာရဲ့ ကွာခြားပုံလေးကို ဆွေးနွေးကြည့်ကြပါ..ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by Thaung Tan မေ 17, 2013. 14 Replies0Likes
လူတိုင်း သေခြင်းတရားဟူသည်ကို တွေ့ကြုံကြရမည် ဖြစ်ပေသည်.ဘာကြောင့် သေရသလည်းဟုမေးလျှင်မည်ကဲ့သို့ ဖြေကြမည်နည်း..(အားလုံးသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေကြပါခင်ဗျာ)ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
လင်းကိုကို liked လင်းကိုကို's profile
မေ 2, 2016
နှင်းဖြူ သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ကံတရား၏ အရှင်သခင်(သို့မဟုတ်) လူသား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ကံတရား၏ အရှင်သခင်(သို့မဟုတ်) လူသား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ကံတရား၏ အရှင်သခင်(သို့မဟုတ်) လူသား
ကံတရားသည် လူ၏အရှင်သခင်မဟုတ် လူသည်သာ ကံတရား၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း ကံတရား၏အရှင်သခင် ဖြစ်စေရန်နေ့စဉ်ပြု လုပ်နေသော(၁)ကာယကံ ကိုယ်မှု(၂)၀စီကံ နှုတ်မှု(၃)မနောကံ စိတ်ဖြင့် ကြံစည်တွေးတောမှု ဟူသော ကံသုံးပါးကို မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် ကုန်ဆုံးသွားသော အတိတ်နှင့် နောင်ဖြစ်လာမည့် အနာဂတ် ကာလတို့ကိုအကောင်းဆုံး ဖန်တီးယူနိုင်ပေသည်။မှတ်ချက်။ ။ကိုယ်တိုင်ရေး...See More
Sai Sai သည် လင်းကိုကို's၏ 'နောင်တ၏မိခင် သို့မဟုတ် အပြစ်တင်ခြင်း.'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မှတ်သားစရာ ဗဟုသုတတွေရပါတယ် ဒါပေမဲ့ တတ် နဲ့ တက် နဲ့ဘာလို့မခွဲခြားတတ်တာလဲ!!???"
Sai Sai သည်လင်းကိုကို's ၏ 'နောင်တ၏မိခင် သို့မဟုတ် အပြစ်တင်ခြင်း.' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ပိုင်တယ် မပိုင်ဘူး..' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'တဏှာ နဲ့ သတိ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ဒီလိုဖြေပေးပါ.(သို့) ကလေးငယ်များကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးပါ.' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ဒီလို တွေးမိပါတယ်.' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ကြည့်မှန်..' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'သူငယ်ချင်းတို့ရော...' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် လင်းကိုကို's၏ 'သူငယ်ချင်းတို့ရော...'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အတွေးကောင်းဖို့ထက် အကောင်းတွေးဖို့ ဦးစားပေးမယ်."
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ချမ်းသာစစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အကြောင်းတရား သို့မဟုတ် သီလ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ငါ၏ ဘ၀.' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်လင်းကိုကို's ၏ 'လျစ်လျူရှုခြင်းနှင့် ဥပက္ခာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 18, 2015 တွင်6:12pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments2Likes
ကံတရားသည် လူ၏အရှင်သခင်မဟုတ် လူသည်သာ ကံတရား၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်း ကံတရား၏အရှင်သခင် ဖြစ်စေရန်
(၃)မနောကံ စိတ်ဖြင့် ကြံစည်တွေးတောမှု ဟူသော ကံသုံးပါးကို မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် ကုန်ဆုံးသွားသော အတိတ်နှင့် နောင်ဖြစ်လာမည့် အနာဂတ် ကာလတို့ကို
ဒီဘလော့ကို ဒီဇင်ဘာ 25, 2014 တွင်8:18pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
အောင်မြင်ခြင်းဟူသည် စင်စစ် ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် စည်းကမ်းဟူသော အကြောင်းအရာနှစ်ခု ပေါင်းစည်းထားသော အရာပင်ဖြစ်ပေသည်။
လောကတွင် လူတိုင်း အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကာလပတ်လုံး အလုပ်ကို နေ့မအား ညမအား လုပ်ကာ ဘ၀၀မ်းစာရေးအတွက်လည်းကောင်း မိစားစု အတွက်လည်းကောင်း အကြောင်းမျိုးစုံဖြင့် နေ့စဉ်
လုပ်ကိုင်ရှာဖွေနေကြရပေသည်။ ထိုလူသားအားလုံးသည် အလုပ်လုပ်ကာအောင်မြင်ချင်သောသူများ
အားလုံးလိုလိုပင် ဖြစ်ကြပေသည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ သူတစ်ပါး အောက်ကျကာ လုပ်ချင်ကြမည်
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 20, 2014 တွင်7:21pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဘာကြောင့် မငြိမ်းချမ်းလည်း ရန်ဖြစ်နေကြလို့ပေါ့
မုန်တီးနေတယ်လို့ မုန်းတီးစိတ်ကို ကိုယ်တိုင်သိအောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
အမုန်းတရားကို ဖန်တီးပေးလိုက်တာက ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် မရောင့်ရဲနိုင်ခြင်းပဲ
မရောင့်ရဲတာကို ရောင့်ရဲတက်လာအောင် လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်
စာနာစိတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိနေဖို့ လိုတယ်.
စာနာစိတ်ဆိုတာ တစ်ဖတ်သား ဒုက္ခရောက်တာကို…
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 19, 2014 တွင်11:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
အရာရာ ဘာမှမမြဲဟု သိသော အသိသည်သာလျှင် မြဲ၏။ လောကဓံတရား ရှစ်ပါးသည် လောကအတွင်း ရှိနေသော သက်ရှိသက်မဲ့ မှန်သမျှကို တိုက်ခက်လျှက် ရှိ၏။ အကြင်တရားတို့သည် အကြောင်းလည်း ရှိ၏ တဖန်ထိုအကြောင်းကြောင့် ပြုလုပ်ခြင်းလည်းရှိ၏။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အကျိုးတရားလည်း ဖြစ်ပေါ်၏။ထိုဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးတရားသည် ဒွန်တွဲလျှက် ရှိသော ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေ၏။ထိုလောကဓံ တရားရှစ်ပါးသည်ကား... (၁) လာက်ရခြင်း လာက်မရခြင်း (၂) အခြွေအရံပေါခြင်း အခြွေအရံမဲ့ခြင်း
(၃) ချီးမွမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ခြင်း
9:33pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့လက်ဆောင်တရားတော် - http://thitsarparamisociety.com/wp-content/uploads/mp3/DrNandamalabhivamsa/disc1/ndml.11/259-ndml.mp3 https://www.youtube.com/watch?v=ebd0QR7_7Gk
11:40am အချိန်ဇူလှိုင် 3, 2014, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လေးစားရပါသော ဓမ္မအဆွေတော် ကိုလင်းကို ခင်ဗျား..။
မိတ်ဆွေတင်ထားသည့်“ တန်ဖိုးရှိသော အလုပ်လုပ်ခြင်း” ဘလော့သည်
တိုလွန်းနေပါသဖြင့် ဘလော့တစ်ပုဒ် အနေအားဖြင့် ဆိုဒ်မှ ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခြင်း
မရှိပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအပ်ပါသည်။
5:16pm အချိန်မေ 4, 2014, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မတွေ့ တာကြာလို့ ပါ
7:14pm အချိန်မတ် 17, 2014, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လေးစားရပါသော ဓမ္မအဆွေတော် ကိုလင်းခင်ဗျာ..။
မိတ်ဆွေတင်ထားသည့် “သညာ နှင့် သတိ ဥာဏ်ပညာ” ဘလော့သည် ဆိုလိုရင်းကို တိတိကျကျ ရောက်အောင် ရေးသားစေချင်ပါသည်။
သညာ နဲ့ ပညာ ကွာခြားမှု မှာ ဥပမာအားဖြင့်........“.ဆား” ဆိုပါတော့ ဆားသည် ငံ၏ လို့ စာကိုဖက်၍ သိသော အသိသည် သညာသိပါ။ ဆား ငံတယ်လို့သာ စာဖက်၍ သိထားသောကြောင့် ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ဘယ်လိုအရသာ ငံတယ်ဆိုတာကိုတော့ သူမသိနိုင်ပေ။ ကိုယ်တိုင် “ဆား”ကို လက်နဲ့ယူပြီး လျှာမှာ တို့ကြည့်တဲ့ သူကလည်း ဆားကို ငံတယ်လို့ သိပေမည်။ တကယ့်ကိုယ်တိုင် လျက်ကြည့်သောကြောင့် ဆား ငံတယ်လို့ သိသော သူ၏ အသိသည် ပညာသိ ဖြစ်ပေသည်။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် လှိုင်ကျော်ထွေး (ယာယီအက်မင်)
11:40am အချိန်အောက်တိုဘာ 6, 2013, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:12pm အချိန်စက်တင်ဘာ 29, 2013, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အကိုလာလယ်သွားပါတယ် ကျမ်းမာရေး သိပ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ 
6:18am အချိန်ှဧပြီ 25, 2013, တွင် saw htwe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:04am အချိန်ဇွန် 11, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:34pm အချိန်ဇွန် 9, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အသိလေးတွေ ပေးတာ ကျေးဇူးပါ
10:45pm အချိန်ဇွန် 6, 2012, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုလင်းကို -
အလုပ်လေးတွေ မပြတ်နိုင်တာမို. အခုမှပဲ တွေ.ပါတယ် -